IPhone 7 waxaa laga yaabaa inuusan laheyn afhayeen labaad kadib dhamaantiis | Wararka IPhone
Mid ka mid ah sheeko-xiisaha xiisaha leh ee imaan doonta xiga iPhone 7 waxay noqon doontaa afhayeen labaad, ama sidaas ayaan moodnay ilaa shalay. Waana taas MacRumors sameeyey u kuurgelid in, in kasta oo ay run tahay inay sax noqon karto, i niyad jabisay - uma dhihi karo tan darteed baloogga. Warbaahinta Mareykanka ayaa ogaatay dukumiintiyo la sheegay soo saaraha IPhone-ka soo socda waxayna ogaadeen inaysan sheegin afhayeenka labaad, hadii aysan kaliya aheyn mikrafoor, laakiin tani maahan calaamadaha kaliya ee wiiqaya rajada aan ka qabno in iPhone 7 uu bixiyo cod kafiican oo aan laheyn headphones.
Waxyaabaha ayaa ah, dukumiintiyadaas kama hadleyso afhayeenka guud sidoo kale, marka tani micnaheedu maahan inay wax uun tahay. Laakiin hadaad eegto mid ka mid ah roon in la sii daayay waqti hore waxaan arki karnaa taas Godadka afhayeenka labaad ee la filayo waa la xiray, taasi waa, waxay kaliya ahaan lahaayeen si sawirka iPhone 7 ee hoose uu u ekaado muuqaal ahaan. Laakiin ma waxaa jiri doona afhayeen labaad mise ma jiro afhayeen labaad?
Ka waran afhayeenka labaad ee iPhone 7?
In kasta oo ay tahay inaan qirto in tani aysan u muuqan wax fiican haba yaraatee, ma jecli inaan lumiyo rajada gebi ahaanba. Sida daadad kasta, waxaa habboon in shaki lagu sii jiro illaa soo bandhigga rasmiga ah ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus. Sidoo kale, sawirka kore ee a meyd la sheegay iPhone 7 wuxuu leeyahay godadka afhayeenka labaad qeyb ilaa qeyb, wax hadii, hadii ay tahay sawir dhab ah, ay naga dhigeyso inaan u maleyno inuu jiri doono afhayeen labaad.
Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxaan sidoo kale xusuusan nahay waxa ugu horreeyay ee la daadiyay ay ahaayeen, kuwa aan lahayn god aan ka ahayn makarafoonka. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku xasuusiyo taas OnLeaks Wuxuu yiri waxay ku tashan lahaayeen qaabka laba afhayeen, inkasta oo ay suurta gal tahay sidoo kale waxa ay dooran lahaayeen inuu noqdo guryo isu eg. Si loo nadiifiyo wixii shaki ah, kaliya waa inaan sugnaa wax ka yar hal bil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » IPhone 7 waxaa laga yaabaa inuusan laheyn afhayeen labaad kadib
Waxaan u maleynayaa in kaliya iPhone 7 Pro uu lahaan doono labada ku hadla iyo tikniyoolajiyadda iPad Pro ...
Ku jawaab Roberto Amezcua
laakiin aan aragno ... sidee ayaad ugu maleyn kartaa in godadkaasi ay noqon doonaan wax lagu qurxiyo ... waa wax aan micno lahayn oo dhab ah meelkasta oo aad eegto, shabakada oo dhan tan horeba waxay umuuqataa kaftan waa wax layaableh Salvame-ka lagu soo raray wararka xanta ah. iphone-ka internetka oo waxaan u maleynayaa inaysan waxba qabanaynin laakiin dhaawacayaan sawirka.
godadkaas ayaa loogu talagalay wax waxay u muuqataa in Apple aan la aqoon, wax walbaa waxay leeyihiin sharraxaad.
Ku jawaab siluX
Haddii aakhirka uusan jiri lahayn afhayeen labaad oo lala wadaago laqiyaasida in Jackku maqlayo muusikada iyada oo la adeegsanayo sameecadaha dhagaha iyo qiimaha ugu dambeeya ee kudhowaad 1000 euro ee nooca aasaasiga ah, waxay ku barari lahaayeen iibinta boosteejada. Kadibna Tim Cook wuxuu soo bixi doonaa isagoo qiil ka bixinaya hoos u dhaca iibka sidii uu ku sameeyay kooxdan ugu dambeysay, isagoo ku doodaya ma aqaano waxa macno darada ah ee isbadalka suuqyada halkii aanan rabin in la aqoonsado in khaladka uu isagu leeyahay iyo in Apple mar kale lumineyso Wuxuu ku dhacay Microsoft oo wuxuu ku dhici doonaa Google go'aano khaldan awgood. Kadib Steve Jobs wuu soo noqday, laakiin yaa soo laaban doona sanado yar gudahood si uu dib ugu sabeeyo shirkadda? Sababtoo ah maadaama uusan ahayn Bill Gates ... mana arko isaga shaqada darteed.
Cydia Eraser waa la cusbooneysiiyay taageerada iOS 9.3.3